မြစ်ဆုံ: သစ်သား ဖြင်. တည်ဆောက်ထားသော ကား
သစ်သား ဖြင်. တည်ဆောက်ထားသော ကား
ကားတစ်စီးလုံးကို သစ်သားနဲ. တည်ဆောက်ထားတာဆိုတော. ကုန်ကျစရိတ်ကတော. သက်သာ မှာပါ ။ တည်ဆောက်ပုံတစ်ဆင်.ချင်း အသေးစိတ်ကို ပြထားတာ ဖြစ်သည်။ သစ်သားသုံးလို.မရနိုင်သော ဘီးတို. အင်ဂျင် စက်အစိတ်အပိုင်းတို.မှ လွဲပြီး နေရာတော်တော်များများကို သစ်သားထည်.သွင်း အသုံးပြုထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သာမာန်ကားတွေထက် အကြမ်းခံနိုင်မှုတော. နည်း နိုင်မည် ။
ရုံးတက် ကျောင်းတက် ဓျေးသွားဖို.လောက်တာ စီးလိုသူများအတွက်တော. အဆင်ပြေမည်.ကားတစ်စီးပါ။ သံ ကုန်ကြမ်း ရှားပါးသော နိုင်ငံများအတွက် အနာဂတ်တွင် အသုံးဝင်မည်. စီမံကိန်း တစ်ခုပါ။ လုပ်သား အရေအတွက်လည်း လျှော.ချ နိုင်သည်။ လက်သမားများ အတွက်တော. အလုပ်အကိုင် တွေ တိုးလာမည်။
photo source// www.facebook.com
Posted by မောင်မောင် at 23:00
25 December 2011 at 05:22
အင်း သစ်သားနဲ့ဆောက်တာဆိုတော့ ခြစားတာတို့ ဆွေးမှာကြောက်ရတယ်ဗျို့။ ဒါပေမဲ့ ပညာရှင်တွေက ဒါတွေကိုကြိုတင်စီမံထားမှာပါ။ မြန်မာပြည်သွင်းရင်တော့ ဝယ်စီးဦးမှ။
ဗဟုသုတလေး ဖတ်သွားတယ် မောင်မောင်ရေ။